Filtrer les éléments par date : mardi, 31 mars 2020
mardi, 31 mars 2020 22:02
Fanjonoana MAHALOKY: Nihemotra tamin’ny fanapahan-keviny ny Faritra DIANA
Hisokatra rahampitso 1 aprily ny taom-panjonoana MAHALOKY. Nihemotra tamin’ny fanapahan-keviny ny Faritra DIANA izay namoaka fampandrenesana ny 27 marsa 2020, milaza fa ahemotra amin’ny fotoana manaraka ny fisokafan’ny taom-panjonoana MAHALOKY noho ny Fahamehana ara-pahasalamana mihatra manerana ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara, amin’ny fisian’ny valanaretina coronavirus.
Nisy ny taratasy fampandrenesana nivoaka tamin’ity talata 31 marsa 2020 milaza ny Fisokafan’ny fanjonoana MAHALOKY. Narahana fepetra izany dia ny hanajana ny « elanelana iray (01) metatra sy tsy mifandray tanana » ho fisorohana ny fiparitahan’ny valanaretina coronavirus.
Hazandrano an-dranomasina malaza amin’iny faritra avaratra iny ny Mahaloky. Tsy misy taolana firy sady matsiro izy io. Tonga any ireo mpanangom-bokatra avy any SAVA rehefa fisokafan’ny taom-panjonoana.
Handefa fiaramanidin’ny kaompania Air France eto ny fanjakana frantsay, haka ireo Frantsay maniry hiverina any Frantsa manoloana ny fisian’ny valanaretina coronavirus. Hiala atsy La Rénion, tsy mitondra mpandeha, io fiaramanidina io, ary hiainga eto Antananarivo ny tolakandron’ny sabotsy 4 aprily 2020.
Talohan’io, dia efa nisy fiaramanidina anankiroa an’ny kaompania EW naka teratany frantsay miisa 83 niainga tao Mahajanga, niazo an’i Mayotte.
Tontosa ny andiany voalohany amin’ny fitiliana faobe « Covid-19 » ireo mpandeha tamin’ny sidina anabakabaka ny 11 sy 12 Martsa 2020 lasa teo rehefa tapitra ny 15 andro nanokana-monina azy ireo taorian’ny nahatongavan’izy ireo teto Madagasikara.
Niisa 731 izy ireo androany, ka ny 516 teny amin’ny CCI Ivato ary ny 215 teo antokontanin’ny Jumbo Score Ankorondrano, no natao fitiliana sy nizahana ny toe-pahalasamany, ary hamaranana ny fitokana-monina izay nandalovan’izy ireo, raha toa ka tsy misy ahiahiana ny amin’ny fahasalamany.
Nanara-maso ny fizotran’izany ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina.
Nozaraina « Certificat de fin de quarantaine » avy amin’ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka, ny 726 tamin’izy ireo, manamarina fa tsy mitondra ny tsimokaretina « Coronavirus », ary afaka namonjy ny toeram-ponenany avy. Ny 512 tamin’ireo teny amin’ny CCI Ivato, ny 214 teny amin’ny Jumbo Score Ankorondrano.
Miisa 50 hatramin’ny telo ora tolakandron’ity 31 Martsa 2020 ity ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus eto Madagasikara taorian’ny fitiliana nataon’ny Institut Pasteur. Tranga vaovao ny 04 amin’izy ireo.
Lehilahy ary vahiny avokoa ireto tranga vaovao ireto, mpandeha tamin'ny zotram-piaramanidina AF934, ka ny telo monina any Toamasina ary ny iray eto Antananarivo.
Tsy ahitana soritraretina izy ireo, araka ny fampitam-baovao nataon’ny Pr Vololontiana Hanta, mpitondrateny ny Foibem-pibaikoana momba ny coronavirus, saingy efa araha-maso any amin'ny hopitaly.
Tsy ahitana soritr’aretina ny 39 amin'izy ireo, misy soritr’aretina kosa ny 11 fa tsy misy sempotra.
Nandray fepetra avy hatrany ny Governoran’i Mahatsiatra Ambony, taorian’ny nahafantarana fa misy tranga iray voamarina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus tamin’ireo olona valo, natokam-ponenana tao Antamponjina.
Hatao faritra mihidy ny Fokontany Antamponjina. Mila manana antony manokana ny fivezivezena.
Nisy mpizahatany tonga tao amin’ny fokontany Nosilava Kaominina Analalava ny harivan’ny alatsinainy 30 marsa 2020. Sambolay miisa 3 no nitondra azy ireo, izay nahitana olona 14.
Nidina avy hatrany nijery ny zava-misy ny lehiben'ny Distrika, ny lehiben'ny boriboritany Analalava, ny Médecin Inspecteur sy mpiasan'ny fahasalamana, ny mpitandro filaminana niaraka tamin’ny Ben'ny Tanàna, ka tamin’izany no nahalalana fa nitsoaka ny mety ho fisian'ny valanaretina Coronavirus any Nosy-Be izy ireo, ka nijery toerana mba mangingina tsy misy olona.
Nisy ny fizahana maripana natao tamin'izy ireo, taorian’izay dia nasaina niverina any Nosy-Be izy ireo.
Maniry ny hahazo fitaovana ahafahana manara-maso ny sisintany aty Analalava ireo tompon'andraikitra, mba hisorohana amin’ny fihanaky ny valanaretina coronavirus, ary ny fampitaovana fitiliana ahafahana mamantatra ireo mitondra tsimokaretina.
mardi, 31 mars 2020 19:40
Antoko MONIMA: Tsy hanamarika ny 1 Aprily 1971 noho ny Covid-19
Nanao fanambarana ny antoko MONIMA tamin’ny alalan’ny Sekretera jeneralin’ny antoko, mampahafantatra ny « namana » rehetra fa « noho ny loza Covid-19 midona amin’ny firenena ka tena manahirana be ny 90 isan-jaton'ny Malagasy dia tsy afaka hanamarika ny 1 Aprily 1971 isika rahampitso ».
Raha vao lefy kosa izao tranga misy izao, hoy hatrany ny fanambarana dia « ho tsaroantsika MONIMA amin’ny fomba mendrika sy miavaka ny Mahery Fon’ny 1 Aprily 1971 sy ny 31 Marsa 1992 ».
849, io no isa ambony indrindra tamin’ireo namoy ny ainy noho ny coronavirus tao anatin’ny iray andro tany Espagne. Tafakatra 8 189 ireo namoy ny ainy any amin’ity firenena ity, hatramin’ny androany.
Izy no firenena eoropeana faharoa aorian’i Italia, ataon’ity valanaretina ity mitondra faisana indrindra hatreto.
Miisa 94 ireo trangan’aretina coronavirus voamarina atsy amin’ny nosy Mayotte, iray amin’ireo departemanta frantsay aty amin’ny ranomasina indianina. Nanao fanambarana ny tomponandraikitra ara-pahasalamana ao an-toerana, androany, fa nisy olona iray matin’ity Covid-19 na coronavirus.
Ity no tranga fahafatesana voalohany naterak’io valanaretina io tao Mayotte.